Inona no hitranga amin'ny malemy. afaka amin'ny Sun (MySQL, OpenOffice, OpenSolaris)? | Avy amin'ny Linux
Inona no hitranga amin'ny malemy. afaka amin'ny Sun (MySQL, OpenOffice, OpenSolaris)?
Vita ny fifanarahana. Oracle izao no tompon'ny Sun. Ny hafatr'i Oracle ho an'ny mpanjifan'ny Sun dia toa ny "Aza matahotra, mifalia." Tsy mora izany rehefa tsy afaka manazava amin'ny antsipiriany izay hataony amin'ny fanomezana rindrambaiko loharano misokatra ny Oracle, toy ny MySQL, OpenOffice, ary OpenSolaris.
Amin'ny ankapobeny, fantatray fa hihena ny katalaogin'ny vokatra lozisialy Sun ary maro ny mpiasa Sun no hatsahatra tsy ho ela. Ara-tantara, rehefa mahazo orinasa Oracle dia fanapahana lalina no fitsipika. Ohatra, Oracle dia nanala mpiasa 5.000 taorian'ny nahazoan'ny PeopleSoft. Amin'ity fotoana ity dia nampahafantatra i Oracle fa tsy hisy afa-tsy ny fialana arivo. Manokana, na dia tsy nisy nilaza an'izany aza "amin'ny firaketana an-tsoratra", dia atahorana ireo sehatra "loharano misokatra" ao anatin'ny Masoandro no mitondra ny vokatr'ireo fahatapahana ireo.
Hatramin'izao, tsy mbola misy olona te hanao fanambarana "ofisialy" momba izay hitranga amin'ny rindrambaiko "loharano misokatra" an'ny Sun. Fantatsika fa farafaharatsiny farafahakeliny tetikasa open source malalaka, ny tetikasa Wonderland, sehatra miorina amin'ny Java ho fampiroboroboana tontolo virtoaly 3-D, dia noroahina. Ho fanampin'izay, Oracle dia hanidy ny tetikasa Kenai, tranonkala fampiantranoana programa maimaimpoana maimaimpoana sy malalaka.
Raha miresaka ny fisokafan'ny kaody ho an'ny tetikasa lehibe, aorian'ny firesahana amin'ireo olona akaiky ny Oracle, tsy misy olona amin'ny Sun mahalala izay ao an-tsain'i Oracle, ary i Oracle tsy miteny akory hoe "mu."
Ny mpanorina MySQL Monty 'Michael' Widenius dia mpitarika manohitra ny fahazoan'ny Oracle an'i Sun. Ny fanoherany ny fifanarahana dia tsy nisy vokany, na izany aza ny fananan'ny Vaomiera eropeana maso akaiky an'i Oracle sy ny drafitra MySQL, mieritreritra aho fa ao anatin'ny fotoana fohy farafaharatsiny mba nanao antoka i Widenius sy ireo mpiara-dia aminy fa hanjavona MySQL eo ambanin'ny fanolorana lozisialy tahiry fananana hafa, izay tazonin'ny Oracle ihany koa. Ny saina be loatra izao dia mifantoka amin'ny MySQL ho an'ny Oracle hanandrana hamono azy.
Na izany na tsy izany, efa ela talohan'ny nitrangan'ny fifanarahana dia nanangana loharano malalaka MySQL, MariaDB i Widenius. Ka na inona na inona hiafaran'ny Oracle amin'ny MySQL, dia hitohy ny kaody database MySQL.
Ny OpenOffice dia toa azo antoka indrindra amin'ireo tetik'asa open source lehibe an'ny Sun. Oracle dia tsy manana vokatra mifaninana amin'ny OpenOffice ao anaty tsipika rindrambaiko misy azy, ary nilaza ny orinasa fa hanohana hatrany ny OpenOffice. Ny fanontaniana eto dia tena misy amin'ny antsipiriany. Fantatray fa mikasa ny hanolotra SaaS (rindrambaiko ho serivisy) i Oracle, kinova OpenOffice ao anaty rahona, saingy tsy manana hevitra izahay amin'ny fotoana na amin'ny fomba hahitantsika azy. Mandritra izany fotoana izany, misy kinova OpenOffice vaovao, kinova 3.2, azo alaina.
OpenSolaris, etsy ankilany, manana ny ho avy maizina indrindra. Na dia nilaza aza i Oracle fa hanohana hatrany i Solaris, dia zara raha nisy teny na dia iray aza momba ny OpenSolaris.
Tsy manampy mihitsy izany hoe mampiasa Linux ny Oracle hamonjy OpenSolaris. Na dia tsy fantatra ivelan'ny faritry ny orinasa aza, Oracle dia mpizara ihany koa Linux. Oracle dia namorona Oracle Unbreakable Linux, klone an'ny Red Hat Enterprise Linux (Red Hat Enterprise Linux), ary mizara izany amin'ny mpanjifany amin'ny safidy karama ho an'ny fanohanana ara-teknika, ary ho an'izao tontolo izao ho toy ny fizarana Linux tsy manohana.
Na izany na tsy izany, miahiahy mafy aho fa na dia hitohy aza ny Solaris SPARC, dia ho foana ny OpenSolaris ho an'ny x86. Izay heveriko fa hiafara amin'ny fanaovana Oracle, satria Oracle dia mpandray anjara lehibe amin'ny kernel Linux, dia mandray ny kaody OpenSolaris ary manambatra azy amin'ny Linux.
Raha OpenSolaris, amin'ny maha rafitra miasa irery, manana vintana ho tafavoaka velona, ​​miahiahy aho fa ny tena tokana mety dia ny fork tazomin'ny vondron'olona mahaleo tena an'ny mpamorona. Hitako fa sarotra be ho an'ny Oracle ny manokana loharano ho an'ny OpenSolaris. Miala tsiny rey ​​olona.
Hita ao | Tontolon'ny informatika (Steven J. Vaughan-Nichols)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Inona no hitranga amin'ny malemy. afaka amin'ny Sun (MySQL, OpenOffice, OpenSolaris)?
Keryx: fanavaozana ivelany ho an'ny mpampiasa Linux
Fahafaham-po: tolo-kevitra vaovao "hitafy" an'i Lucid